တင်ဒါကြေငြာချက် - Manisa-Bandırmaမီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း RayHaber | raillynews
[03 / 04 / 2020] ကမ္ဘာပေါ်တွင် Coronavirus ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာတစ်သန်းကျော် ၃၄၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး ၅၄,၀၀၀ ကျော်သွားပြီ	လောက
[03 / 04 / 2020] Corona ဗိုင်းရပ်စ်၏လက္ခဏာများကဘာလဲ။ ဘယ်လိုထုတ်လွှင့်သလဲ။ ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ	06 တူရကီ
[03 / 04 / 2020] COVID-19 ပလက်ဖောင်းအောက်တွင်ကာကွယ်ဆေးစီမံကိန်း ၇ ခုရှိသည်	06 တူရကီ
[02 / 04 / 2020] နာတာရှည်လူနာများ၏သက်တမ်းကုန်သွားသည့်ကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများမှာမှန်ကန်လိမ့်မည်	06 တူရကီ
[01 / 04 / 2020] Izmir Metropolitan မှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအတွက်တည်းခိုနေထိုင်မှုအထောက်အပံ့!	35 Izmir
« ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက်: B70 ကြိုတင်ဆွဲ - pre- ဆွဲထုတ်ကွန်ကရစ် Crossmember ဝယ်ယူမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လှေငြိမ် Buy ပါလိမ့်မယ် »
မဏိပူရလိုင်း KM - ၁၃၈ + ၇၈၆၊ ကီလိုမီတာ - ၁၇၀ + ၁၂၀၊ ကီလိုမီတာ - ၂၀၂ + ၄၀၀ နှင့်ကီလိုမီတာ - ၂၂၁ + ၂၃၃ ၄ လက်ရှိအလုပ်များ ကမ်းလှမ်းမှုများကို EKAP မှတဆင့်အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်သာလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
KN: 2020 / 48616
က) အမည်: STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဒေသန္တရ SERVICE ကိုရုံးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory CONTROL
ခ) လိပ်စာ - ATATÜRK Avenue 121 / A ALSANCAK KONAK / İZMİR
ဂ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324643131 - 2324647798
က) အမည် - မဏိပူရလိုင်း KM - ၁၃၈ + ၇၈၆၊ ကီလိုမီတာ - ၁၇၀ + ၁၂၀၊ ကီလိုမီတာ - ၂၀၂ + ၄၀၀ နှင့်ကီလိုမီတာ - ကီလိုမီတာ ၄ ခုရှိသည့်အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်း - ၂၂၁ + ၂၃၀
၃၁၅၀ m3150 အားပျော့သောမြေတူးဖော်မှုအမျိုးအစားများ၊ ၅၆၅ m3 c565 /3အားဖြည့်ကွန်ကရစ်၊ သံမဏိလုပ်ငန်း ၄၇ တန်၊ ကျောက်မျက်ရတနာများဖြည့်တင်းရန် ၈၆၇ m30၊ ကျောက်တုံးကျောက် ၂၀၀ နှင့်ကျောက်တုံးများဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
(ဂ) လုပ်ရန် / ပေးပို့မည့်နေရာ - Manisa-Bandırma
ဃ) ကာလ / Delivery Date: 180 ပေးပို့တည်နေရာ (တရာရှစ်ဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းမှ။
အဆိုပါ 15 ကာလ၌စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့် နေ့မှစ. : အစဃ) အလုပျ
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 26.02.2020 - 14: 00
(ခ) တင်ဒါကော်မရှင်၏အစည်းအဝေးနေရာ (e-offs များဖွင့်လှစ်မည့်လိပ်စာ): TCDD ၃။ ဒေသဆိုင်ရာရုံးအဆောက်အအုံ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Banda-လိုင်း Creek အဘိဓါန်ခံတပ်Yaptırılacaktırအတွက် Manisa
တင်ဒါခေါ်ယူမှု - မြေတိုင်းစီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှု (Manisa Bandırmaလိုင်း Km: 155 + 000 - …
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - ရေနုတ်မြောင်းနှင့်နံရံဆောက်လုပ်ရေးကိုဆောက်လုပ်လိမ့်မည် (Manisa - Bandırma…
တင်ဒါကြေငြာချက် - ဆင်ခြေလျှောအစီအစဉ်ကို Manisa တွင်ပြုလုပ်မည် (Manisa Bandırma Line …
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Manisa Bandırmaလိုင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအမှတ် ၄
Bandırma - Balıkesir - Manisa - Menemen လိုင်းအချက်ပြနှင့်ဆက်သွယ်ရေး…
TCDD3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ရုရှားနိုင်ငံနှင့်အတူဧပြီ41900 ရထားလမ်း
Haydarpaşaနှင့် Sirkeci တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားရုံး၏တုံ့ပြန်မှု
ကမ္ဘာပေါ်တွင် Coronavirus ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာတစ်သန်းကျော် ၃၄၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး ၅၄,၀၀၀ ကျော်သွားပြီ
Corona ဗိုင်းရပ်စ်၏လက္ခဏာများကဘာလဲ။ ဘယ်လိုထုတ်လွှင့်သလဲ။ ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ
KARDEMİRဖောင်ဒေးရှင်း၏ ၈၃ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်
COVID-19 ပလက်ဖောင်းအောက်တွင်ကာကွယ်ဆေးစီမံကိန်း ၇ ခုရှိသည်
ကုန်သွယ်ရေးအပေါ် Coronavirus ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှမီးရထားဖြေရှင်းချက်
Denizli တွင် Vefa Social Support Group သည်စည်ပင်သာယာဘတ်စ်ကားများမှအခမဲ့ဖြစ်သည်
IMM မှဖွင့်လှစ်ထားသောHaydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာတွင်အမှု၌ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
TEM အဝေးပြေးလမ်းမ Sapanca Entries နှင့်ထွက်ပေါက်ပိတ်ထားသည်
သေဆုံးသူနှစ် ဦး သည် Anatolian အဝေးပြေးလမ်းတွင်ပိတ်ထားခဲ့သည်